Dolalkii Dusha Geeyey ma Jwxo-shiilkii Dilaybaa, Nuur Naruuro u Gaysan oo Nacfi uu ka Sugaa! – Rasaasa News
Feb 11, 2010 calidheere, Jwxo-shiil, nuur
Naa wuxu Naaqusanaa ma ninbuusan ahayn, nafta Eebe abuuray ee uu nolosheedaba qaaday Jwxo-shiil baan ku nabnaan, oo nafaqaan helaaye tolkayow nabadeey, walaalkii nin nacow nabar aan bogsanayn iyo naxli waa ku hayaa. Caligaa ku najuustay iyo xabadan kaa nixinaysa nabsi weeye ogow, kolka aad nafta weydana nus shilin kaa bixinmaayo.
Warar xamxam dhaafay oo xaqiiqadoodii la hayo, ayaa sheegaya in Nuur Maxamed Faatule, oo ka mid ahaa kooxda Jwxo-shiil, in magaalada Dhoobley uu dirqi kaga fokaday iskuday dil oo uu soo maleegay ninka ay xigtada yihiin Jwxo-shiil, wakiilkana uga ah Afrikada Bari Ali Dheere [cadhoole].
Nuur, oo ay xigto ahaayeen Dr. Maxamed Siraad Dolal, ayaa ka mid ahaan dhalinyaradii uu Dr. Dolal ku daray Jabhada ONLF, ka dib dilkii foosha xumaa ee Aabihii iyo Adeerkii ay ciidamada Tigraygu ugu gaysteen magaalada Qabridahare. Xiligaa wixii ka dambeeyey Nuur waxaa uu ahaa N/hure Jabhada onlf ka tirsan, Isqabashadii Dr. Dolal iyo Jwxo-shiil, ayey sandareero ka gaadhay Nuur dhinaca Jwxo-shiil, arintaas oo uu Jwxo-shiil ku dilayey Dr. Dolal.
Hadaba, sida ay warar na soo gaadhayaa sheegayaan waxaa ay xurguf soo kala dhexgashay Cali dheere iyo Nuur Faatule, xurguftaas oo in badan soctay, ayaa lasheegayaa in ay gaadhay heerkii ugu sareeyay. Xurgufta ayaa ka bilaabatay in Nuur loo sheegay in uu dib ugu laabto gudaha Ogadeeniya joojiyana dhalinyarada reerkiisa ah ee ka soo horjeedsaday kooxda Jwxo-shiil. Nuur wuu diiday in uu gudaha galo, waxaa kale oo uu waxba ka qaban waayey beeshiisa kooxda Jwxo-shiil ka hortimid, sidaasina Nuur waxaa laggaga jaray qayb kaga soo hagaagi jirtay qaaraanka dibada laga helo.
Sidaas daraad, Cali Dheere iyo Jwxo-shiil waxaa in muddo ahba ka go’nayd in ay Nuur Faatule si uu wajigoodda uga fogaado ay ula dhaqmaan si bini’aadamnimadda ka baxsan, meel kastana way ku ihaaneeyeen. Waxay ula dhaqmaan si aan shakhsi bini’aadam ah loola dhaqmin, biilkii waanu ka jaray, beeshiisa ma dhexgali karo, meel cidlo ah buu taagan yahay iyo waa dhaw wuu waalan doonaa.
Beri dhawayd waxaa dhacday in Cali dheere uu Nuur Faatule ku yidhi ” Aniga iyo Adiga magaaladan Dhoobley la yidhaahdo nama wada qaado, ee sida ugu dhaqsaha badan waa inaad uga tagtaa.” Nuur Faatule oo aan ihaanada garabka Jwxo-shiil iska caadaystay, ayaa hadalkaa waxweyn ka soo qaadin.
Cali dheere wuxuu Nuur Fatule ugu caga jugleeyay hadaadan yeelin waxa aan ku leeyahay, waxaan ku tusinayaa awoodayda.
Sida ay wararku sheegayaan, xil galab ah, ayaa waxaa isasoo raacay Cali dheere iyo wiil aan magaciisa naloo sheegin oo aad u hubaysan, waxayna soo gaareen meel ay ku ogaayeen in uu jooay Nuur Faatule. Nuur Faatule oo khabar daar ah, oo aan waxba ogay si kadis ah dhinacyadiisa uga dheceen rasaas u dhacday sid qoriga boobaha.
Arintaa waxay Cali dheere iyo wiilka la socday oo reer haaruun ah u sameeyeen in ay tusaan in ay tahay digniintii ugu dambeysay. Nasiib wanaag waxaa meesha joogay Wiil naloogu sheegay in uu Muqaabil yahay, isagaana arintooda dhex galay iyada oo ayna dhimasho dhicin.
Nuur Faatule cid uu wanaag u gaystay oo uu maanta ku carari karo ma jirto. Jwxo-shiil oo bishii 100 Dollar u soo tuuri jirayna wuu ka goostay. Hada meel cidla ah ayuu xooran yahay.
Qaxootiga Ifo iyo Xagardheerna kuma noqon karo, waayo waxaa maalmahan dambe aad ugu soo qulqulaya ciidamo ka soo qancay Jwxo-shiil, kuwaas oo rabin in ay Kaalinka iyo Gumaysiga Itoobiya isu dhiibaan. Nuur wuxuu aad uga baqayaa wiilasha, oo wuxuuna isleeyahay haday Qaxootiyada kugu helaan way ku tumayaan, waxa uu hore u galay daraadii.
Nuur Faatule ma aha shakhsi isku kalsoon oo qawl leh, sidaa darteed ayay shacabka intiisa badan u arkaan nin aan mudnayn dhaxgalka dadweynaha, horaa loo yidhi “nin aan kuu furayn yuuna kuu rarin.”